विद्यार्थीले बनाइदिए आफ्ना गुरुलाई घर! – Hotpati Media
विद्यार्थीले बनाइदिए आफ्ना गुरुलाई घर!
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०७:०३ मा प्रकाशित (1 हप्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
भरतपुर – जीवनभर भाडामा बस्दै आएका शिक्षक पशुपतिलाल कर्ण अचेल निकै खुसी छन् । आफ्नै पूर्वविद्यार्थीले गुरुदक्षिणास्वरूप घर निर्माण गरिदिएपछि कर्णका आँखामा हर्षका आँसु टलमलाएका छन् ।
खल्तीबाट रुमाल झिकेर आँसु पुछ्दै उनले भने, “आज मेरो जीवनको सबैभन्दा खुसीको दिन हो । मैले मेरा शिष्यबाट गुरुदक्षिणा प्राप्त गरेँ ।”
कङ्काली माध्यमिक विद्यालयमा ३३ वर्षसम्म शिक्षक र प्रधानाध्यापक रहेका कर्ण अहिलेसम्म डेरामा थिए । आफ्नै पूर्वविद्यार्थीबाट गुरुदक्षिणास्वरूप घर नै उपहार पाएपछि उनमा खुसीको सीमा छैन । उनले भने, “यो उपहार मेरा लागि अमूल्य छ ।”
२०३६ सालदेखि २०६८ असोजसम्म शिक्षण पेसामा रहेका कर्णले अवकाश लिए पनि उनलाई विद्यालयले भने छाडेन । पुनः उनलाई विद्यालयले २०६९ चैतसम्म निजी स्रोतमा राख्यो ।
आजीवन शिक्षण पेसा अवलम्बन गरेेेका कर्ण सरले अहिले विद्यालय त छोडे तर पूर्वविद्यार्थीको मनबाट भने उनी बाहिरिन सकेेेेनन् । फलस्वरूप गुरुदक्षिणाका रूपमा घर पाए ।
पूर्वविद्यार्थी समाज कङ्काली माविले २५ लाख रुपियाँको लगानीमा सो घर निर्माण गरेको समाजका अध्यक्ष अर्जुन लम्सालले जानकारी दिएका छन् ।
“जीवनभर अर्काको घरमा बसेर हामीलाई पढाउनुभयो तर जीवनको उत्तराद्र्धमा पनि अरूकै घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न घर बनाइदिएका हौँ”, उनले भने, “विद्यालय नजिकै कर्ण सरकी धर्मपत्नी बुद्धमावती देवीको नाममा सात धुर जग्गा रहेछ । हामीले यही जग्गामा पक्की घर बनाइदिएका हौँ ।”
कर्ण झन्डै ४० वर्ष मदनबहादुर ढुङ्गानाको घरमा डेरा बस्ने उनलाई ढुङ्गाना परिवारले पनि कहिल्यै भाडा लिएन । ढुङ्गानाका छोराछोरीसमेत सोही विद्यालयमा पढ्ने र साँझबिहान घरमा पनि कर्ण सरले नै ट्युसन पढाइदिने भएकाले पनि डेराको भाडा कहिल्यै तिर्नु नपरेको बताइएको छ । गुरुदक्षिणाका रूपमा प्राप्त गुरु आवास बनाउन १५४ जना पूर्वविद्यार्थीले १० हजार देखि दुई लाख रुपियाँसम्म सहयोग गरेका छन् ।